Coluracetam powder (135463-81-9) hplc = 98% | AASraw Nootropics powder
/ Products / Nootropics powder / Coluracetam upfu
MUTSVENE unobatanidzwa uye unogadzira zvigadzirwa kubva kugiramu kusvika pakukura kweColuracetam powder (135463-81-9), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Coluracetam powder ndeyeboka rakawanda ra racetam zvinodhaka. Zvinowanzotorwa kuti zviyeuchidze kuwedzera zvinhu pamwe chete nemigumisiro yaro pamagariro evanhu nekuzvidya mwoyo. Kunyange zvazvo coluracetam powder inowanzobatanidzwa nezvikomborero izvi, yakave ichitaurirwawo kukurudzira optic zvinhu kunyange zvidzidzo zvinoenderera zvinodiwa kuti zvione nzira chaiyo dzinobatsira izvi.
Molecular Kurema: 341.4
Raw Coluracetam powder mu SMART mhirizhonga
Coluracetam powder (MKC-231) chirwere che racetam chinonzi chiyeuchidzo chekushandisa zvinodhaka. Iyo inokwanisa kuchengetedza choline kupinda mu-neurons pavanenge vasina kukanganisa, asi iye zvino hapana humwe uchapupu hwehutano hwemaootropic madhara.
Mhuka yekutsvakurudza paColuracetam powder inoshandisa muromo we 300-3,000mcg / kg bodyweight, iyo inenge yakashandurwa muchirwere chevanhu che 48-480mcg / kg kana (kune munhu 150lb) 3.2-32.7mb pasi rose.
Zvinoratidzika kuva nekukurumidza kinetics, ine nhepfenyuro muropa kumativi e-30 maminiti uye pakaderera mukati maawa 3. Pamusana peizvi, kuwedzera kungave nguva yakavimbiswa mukuenzana nemabasa.
Ndezvipi zveZvino Ndinofanira Kutarisira kubva paRaw Coluracetam powder
Coluracetam powder inoratidzirwa kuvandudza kugadziriswa kwebasa nekuyeuka mumakumbo, uye muchirevo, mhinduro imwechete inotarisirwa kuvanhu. Chidzidzo chakaitwa naBrainCells Inc. chakaratidza kukurudzirwa kwepamusoro pamakumbo akapiwa zvinhu AF64A (neuron-specific neurotoxin) kwemazuva masere pamwe chete neColuracetam yakasvibirira yakawanda mu 3 mg doses.Vakazopinza muMorris Water Maze yakaenzana kuti vaone kukwanisa kupfuurira kuburikidza naro, uye kunyange kusvika maawa 72 mushure mekupedzisira 8 mg dose, ivo vachiri kukwanisa. Chimwe chikonzero chinokosha chekudzidza iyi ndechekuti mitsva yaive ichiri kuonekwa mazuva matatu mushure mekupedzisira, kunyange zvazvo sarum concentration yeColuracetam powder yakanga isingakoshi.
Kuora mwoyo uye Kuzvidya Mwoyo
BrainCells Inc. yakawana kuti muyero we240 mg (wakapatsanurwa kuva maitiro matatu ezuva rimwe nerimwe e80 mg) wakabatsira pakurapa kudengenyeka kukuru ne co-morbid GAD (zvakanyanya kufunganya chirwere). Zvisinei, kusiyana kwacho kwakanyanya kutaurwa kune avo vasina kuwana rubatsiro pakushandisa zvakanyanya kuora mwoyo. Mushure mekunge imwe yero, pakanga pasina kuoneka kwakasiyana, asi mushure mokunge mairi maviri e80 mg, 36% yakanga yavandudza zvidzidzo panguva yekuedzwa kwepfungwa yekuedzwa.
Coluracetam powder yave ichibatanidzwa nemagetsi e-optic akadai sekuwedzera kwemavara, maonero, uye zvakajeka. Kunyange zvazvo pasina humwe uchapupu huripo hunotsigira nzira dzinobatsira izvi, nyanzvi dzinofunga kuti Coluracetam powder inoshandisa muchikamu cheuropi iyo inotarisa maitiro ekuona.
Coluracetam pfumbu yakashata (MKC-231) inogadzira racetam zvinodhaka zvinonzi inonzi neotropic compound. Haina hukuru hwehupupuri hunotsvakurudza, asi nzira dzekuita (pamwe nekugadzirisa) dzinoita se dzakasiyana zvikuru nedzimwe marcetam mazana akaita sePiracetam kana Aniracetam.
Coluracetam powder inoratidzika kuti iwirirane nehutano hunozivikanwa sehukama hwepamusoro hwecholine hutsva (HACU kwenguva pfupi), iyo ndiyo danho rekugadzirisa-kukonzera kwekugadzira choline mu neuron kuti inopindirana neurotransmitter acetylcholine. Kuwedzerwa kwehuwandu hweHACU kunooneka kuwedzera basa re cholinergic neurons, saka iyo inoshandiswa chinangwa chekuziva kugadzirisa.
Kupindira mumakonzo (sezvo pasina humwe uchapupu hwevanhu iye zvino) kutsigira kushandiswa kweColuracetam poda yakaderera pamatsetse emakona asinganzwiki kuchengetedza HACU iyo isina kukanganisa nekushandiswa kwemishonga yekutsvakurudza inozivikanwa kuti inoparadza HACU. Uhu humwe uhu huripo hunotarisa zvinokonzerwa nemigumisiro yeColuracetam powder paHACU yeanoroni neuroni yakakundikana kuwana chero kuwirirana kunokosha.
Coluracetam poda yakasanganiswa zvakare yakabatanidzwa kushamwaridzana necholine vatengesi mumuviri, asi hazvizivikanwi chaizvo zvainoita kamwe chete.
Pakazara, parizvino pane husina kukwana humbowo hwekutsigira iko kushandiswa kweColuracetam poda yekuziva kwekuvandudza. Zvimwe zvidzidzo zvinodiwa kuti zvionekwe kana iine basa rekurapa mune dzimwe nguva apo HACU inogona kunge isisina simba (senge chirwere cheAlzheimer).
Kungofanana nemarcetam akawanda, Coluracetam poda yakawanda inowedzera choline inowedzera, asi inowedzera kuwedzerwa mune zvakakanganiswa neurons. Kunyanya, Coluracetam powder inopindirana neHACU, iyo inokonzera kukonzera choline mukati meeurons. Izvi zvinowedzera kuitika kunoitika panguva yeacetylcholine synthesis process.
Sezvo Coluracetam powder inovandudza choline kuchengetedzwa panguva iyi, yakawanda yakawanda inoshandurwa kuva acetylcholine. Izvi zvinoguma nekuwedzera kukuyeuka, kutarisa, nekuchenjerera. Zvakakosha kucherechedza apa, kuti izvi zvinobatsira zvaingoonekwa mune zvidzidzo neyemapurisa asina kukwana, kwete munyaya dzinowanzoshanda neurons.
Coluracetam poda yakasarudzwa inoratidzwawo pakuvandudza AMPA kukunda, iyo inzira inokonzera kugadzirisa basa nekuchenjerera.
Kunyange zvazvo Coluracetam powder inopindirana necholine vatakuri vemitengerwo zvakare, hakusi kusununguka kutsanangura kuti sei kana kuti kubatana uku kunoitika sei, kana chii chinoitika mushure mekubatana.
Ko Raw Coluracetam powder Ane Mikana Dzose
Kushandiswa kweColuracetam powder hakusi yakachengeteka uye ine maduku mashoma emigumisiro. Izvozvo zvinowanzova nemigumisiro iyo inogona kuonekwa ndeye musoro. Izvi zvinogona kunyangwe kuverengwa ne stacking Coluracetam powder neCroprophenoxine, Alpha GPC, kana CDP Choline kuderedza zvakadaro migumisiro. Zvisinei, kana uri kuronga kutenga Coluracetam pfumbi yakasviba, bvunza iwe kugovera kambani kuti uwedzere mirayiridzo yekuti ungaisa sei Coluracetam powder.
Nzira yekutenga Coluracetam powder kubva kuAASraw